Banaanbax ka dhacay Magalada Cadaado | SMC
Home WARARKA MAANTA Banaanbax ka dhacay Magalada Cadaado
Barqanimadii Maanta ayaa waxaa Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah Shacabka kala duwan ee ku nool Magaladaas.
Dadka banaanbaxa dhigayay ayaa waxaa ay dalabdanayeen in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fuliyo balantii uu horay ula galay ee aheyd in Magaalada Cadaado ay noqoneyso Xarunta Baarlamaanka Galmudug.
Qaar ka mid ah Odayaasha & Waxgaradka Magalada Cadaado oo meel fagaaro ah ku hadlayay banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay sheegeen inay xoojinayaan hadalkii shalay ee Odayaasha Cadaado,kaas oo ahaa hadii aan Xarunta Baarlamaanka Galmudug laga dhigin Cadaado aysan qeyb ka aheyn dhismaha Galmudug.
Waxaa ay sidoo kale hadalkooda intaasi ku dareen in marnaba ay lagama maarmaan tahay in Dowladda Soomaaliya ay fuliso balanqaadkii,isla markaana maqaamka Cadaado ay meel saarto,sidoo kalena hadii Xarunta Baarlamaanka Galmudug aysan noqon Cadaado aysan Dhuusamareeb u aqoonsaneyn Xarunta Maamulka Galmudug.
Si kastaba Banaanbaxaan Maanta ka dhacay Magalada Cadaado ayaa waxaa uu kusoo aaayaa xilli xalay Magaalada Dhuusamareeb lagu soo geb-gabeeyay shirka dib u heshiisiinta Galmudug,isla markaana Madaxweyne Farmaajo uu sheegay in loo gudbayo Wajiga 2aad ee dhisamaha Galmudug mideysan.
Previous articleXog:-Khayre oo bilaabay olale uu Farmaajo kaga dhaadhicinayo sii deynta Roobow [Sirta ku duugan]
Next article(Aqriso) Xaaf oo looga baxay heshiis lala galay asigoona afka furtay